ၥံၪ့လထံၭဒဲအဆၧၥၪ. | Radio Veritas Asia
အဂဲးဘဲၫယီၩ ၥံၪ့ထံၭလၧအဂ့ၩနီ ၥၪထၪ့ဆၧအအၧၩ့အ့ၬ. ၥံၪ့ထံၭလၧအအၧၩ့နီၪ ၥၪထၪ့ဆၧအဂ့ၩဆ့အ့ၬ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ၥံၪ့လထံၭလါလါနီၪ ၦၥ့ၪယၫလၧ အဆၧၥၪဒၪဝ့ၫအကၠီၩ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ လၧဆၧဆူၪအလီၩ့နီၪ ၦအၪ့ဒ့ၭချိၪ့ဒိၩ့ၥၪဆ့အ့ၬ. လၧဆၧဆူၪၡိၬအလီၩ့နီၪ ၦအၪ့ဒ့ၭစဘံၭၥၪဆ့အ့ၬ.
ၦလၧအဂ့ၩနီၪ ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧအဂ့ၩလၧအ အီၪက့ၪကီၪ့ဝ့ၫ လၧအလးဂ့ၩ အီၪလၧအၥၭခံဖၧၩ့တၭ ၦလၧအအၧၩ့နီၪ ဖီၪ့ထၪ့ဖံၭထၪ့ ဆၧအၧၩ့လၧအအီၪက့ၪကီၪ့ဝ့ၫ အလးအၧၩ့အီၪ လၧ အၥၭခံဖၧၩ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဘဲၫအဎွ့ၩလၨၪ လၧအၥၭအၥိၭနီၪ အနိၭထၪ့ဖျ့ၭဝ့ၫ လီၫ.
ဆၧလၧယမၪလူၬနၥံၪနီၪ နၥံၪလမၩဘၪတၭ မွဲဘၪ နီၫလၧနၥံၪကိၭယၧၩ ကဆါဧ့ ကဆါဧ့ နီၪလဲၪ.
ကယဲၦလၧအဂဲၫလၧယအီၪ ဒဲနါဂၧၫ့ယလူယထၫတၭ မၩဝ့ၫလဂၩလါလါနီၪ မၩအၥၭဘဲၫဆၧနီၪအၥိၭလဲၪနီၪ ယမိဒုၭနဲၪနၥံၪလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫၦမၩဂံၪ့တၭ ခုၪ့လၩ့ဆၧဖၧၩ့ယိၬတၭ မၩဝ့ၫအခၪ့ထံၭ လၧလိးအလီၩ့အၥိၭနီၪလီၫ. ထံၫထၪ့ဖၭဒိၪဆ့ၭဘၪ အဂံၪ့နီၪ မၩဝၭမၩဂဲၩဝ့ၫၥ့ၪအ့ၬ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အခၪ့ထံၭအီၪလၧလိးအလီၩ့လီၫ.- ၦလၧအနါဂၧၫ့တၭ လ မၩဘၪဝ့ၫနီၪ မၩအၥၭဘဲၫၦလၧ အမၩဂံၪ့လၧဂၪ့ခိၪအလီၩ့နီၪ အခၪ့ထံၭအခၧၫ့ လအီၪဘၪအၥိၭနီၪလီၫ. ထံၫဆ့ၭဘၪဝ့ၫတၭ လၩ့ဎီးခွံၬဝ့ၫချဲၫ့မၬတၭး ဂံၪ့အလၩ့ဎီးခွံၬနီၪနၭမၬကၨ.
ၦလၧခဲၫ့လဖၪနီၪ မိအီၪဘၪလၧယၫတၭ ၦလၧယၫလဖၪ မိအီၪဘၪလၧခဲၫ့လီၫ.